sexualpleasure Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / sexualpleasure
औंलाबाट कसरी सेक्सको आनन्द हुन्छ ?
Tags: alert-news, featured, fingersex, sextips, sexual, sexualdesire, sexualpleasure
खबरडेक्स, १ फागुन । सेक्स अर्थात् यौनसम्पर्क गर्नु भन्नाले धेरैजसोले योनि-लिङ्ग मैथुनलाई सम्झन्छन् । यस्तो यौनसम्पर्क योनि-लिङ्ग मात्र नभै मुख-मैथुन वा गुदा-मैथुन पनि हुन सक्छ । योनिमा औंला पसाउनु भनेको पक्कै नै यौन क्रियाकलाप हो । यसलाई यौनसम्पर्ककै रूपमा परिभाषित… बाँकी अंश »
यौनसम्बन्धले स्वास्थ्यमा कसरी फाइदा गर्छ ?
Tags: alert-news, benifits, healthtips, in-odd, sex, sexualintercourse, sexualpleasure
खबरडेक्स,१२ माघ । कहिलेकाहीं मानिसहरू एउटै कुरामा अति आशक्त हुन्छन् र त्यस्तो किसिमको आशक्तिले नकारात्मक असर पनि पुर्‍याउँछ । मानिसका यस्ता व्यवहारहरूमाथि विभिन्न अध्ययन-अनुसन्धान भएका छन् । यौन क्रियाकलापका फाइदा वा बेफाइदाका सम्बन्धमा धेरै खोजी भएका छन् । ती अनुसन्धानअनुसार… बाँकी अंश »
महिलालाई यौनसुख दिन के गर्ने ?
Tags: in-odd, sextips, sexualpleasure, women
खबरडेक्स,७ माघ । लिङ्गको नाप वा आकारको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता वा चासो आफ्नो यौनसाथीलाई यौनसुख प्रदान गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने विषयमा हुन्छ । गहिरिएर हेर्ने हो भने लिङ्गको लम्बाइ वा भनौं नापको कुरा यौनसुख लिने-दिने कुरामा मात्र सीमित नभै… बाँकी अंश »